नेपाल देशले के मागेको छ अहिले - Muldhar Post
नेपाल देशले के मागेको छ अहिले
मीनबहादुर पण्डित २०७५, २५ मंसिर मंगलवार 289 पटक हेरिएको
हाम्रो देश नेपाललार्इ रगत होईन कर दिए पुग्छ र कर नै आवश्यक हो । अनी नेपालीको काम कर्तव्य दिएपुग्छ । ‘देशले रगत मागे मलाई बली चडाउनु, रुदिनन मेरी आमा’. तर देशले अव कहिलैपनी रगत र शरिरको बलिखान मागेको छैन् । कर्म मागेको छ मेहनत मागेको छ लगनशिल मागेको छ । देशको नाममा सरिरको बली दीने र लीने त स्वार्थी शासकहरू र स्वार्थी राजनीतिक पार्टीहरू हुन ।अरु कसैलार्इ चाहिदैन देशको लागि बलिदान ।
देशले त केबल इमांदारीता माग्छ, अनी श्रमदान र बुद्दी दान मात्र माग्छ, त्यो पनी सित्तै होईन उचित पारिश्रमिक लिएर । त्यसैले सांसद देखि मन्त्री र कर्मचारीहरूले जनताको करबाट लिएको तलब खाएपछी त देशको लागि काम गर्नु पर्यो नि । र हर्को महत्पूर्ण कुरा देशको बिकास गर्ने हेतुले बनेका ठेकेदारले पनी योजना अनुसारको पैंसा पनि लिनुपर्यो र गुणस्तरीय काम पनी गर्नु पर्यो । यसो गरेमा कोही कसैलार्इ कारबही हुदैन उल्टै सम्मान हुन्छ ।
नेपाल देशको स्थापना हुदै गर्दा देशले रगत मागेको थियो र पुर्खाले चाहे जती रगत दिएर नेपाल देश बचाएका पनी थीए, तर अब त्यो अध्याए समाप्त भैसकेको छ । अहिले देशको लागि बलिदान लिन रत्तिभर आवश्यक छैन । अहिले त विश्वमा कानन छ कानुनले नै सबै फैसला गरिदिन्छ । अहिले देशले मागेको कुरा समय अनुसार फरक हुन्छ । अहिले देशले के माग़ेको छ सबै राजनीतिज्ञ र बुद्दीजीबीहरूले बुझेकै छन, तर बुझेर के गर्नु ? दीने चाहीं कोही छैनन । त्यहि भएर नै नेपाल बन्न सकेन ।